ချစ်လိပ်ပြာ အချစ်စာပေ: ဆံပင်ညိုညိုလေး (အပိုင်း ၃)
ဆံပင်ညိုညိုလေး (အပိုင်း ၃)
နောက်ထပ် ရက်အနည်းငယ်တွင် ထွေး သည် ဒေးဗစ် အနားသို့ ကပ်ရန် ပို ရဲလာသည်။ ခါးကိုင်း၍ အလုပ်လုပ်နေရင်း မော့ကြည့်မိလျှင် ဒေးဗစ် စိုက်ကြည့်နေသည်ကို မြင်ရတတ်သည်။ မီးဖို ကြမ်းပြင်ကို ကုံး၍တိုက် နေလျှင် ဒေးဗစ်ဝင်လာပြီး လေးဖက်ထောက်ထား၍ ဖင်ထောင်နေသည်ကို မုန့်တစ်ခုခု ယူစားရင်း စိုက်ကြည့်နေသည်။ တစ်ခါတစ်ခါ အိမ်တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ ရုတ်တရက်ထွက်လာရင်း လက်က ပျံထွက်လာပြီး သူမရင်ပတ်ကိုပုတ်သည်။ ရုတ်တရက်လို ဖြစ်သော်လည်း နည်းနည်းကြာမှ လက်ဖယ်သွားသည်။ ကြောင်အိမ် နား ကပ်ရပ် ကျောပေး နေစဉ် နောက်က ရောက်လာပြီး သူ့တင်ပါးကို ဝင်ကပ်တော့ တောင်နေသောလီးကြီး၏ အတွေ့ ကို ခံစားရသည်။
နောက်တော့ တစ်ခုက ဖြစ်လာသည်။ ၀ိုင်ခွက်များကို မီးဖိုထဲတွင် ဆေးကြောနေစဉ် ရုတ်တရက် ချော်ပြီး ကြမ်းပေါ် ကျသွားသည်။ လှမ်း ဖမ်းသော်လည်း မမှီလိုက်တော့။ ဖန်ခွက်ကွဲသံသည် တစ်အိမ်လုံးဆူသွားသည်။ သူ ခဏလေး ငြိမ်ပြီး နားစွင့်မိသည်။ ဘာမှတော့မကြား။ အမှားအယွင်းတစ်ခုခုလုပ်မိလျှင် ဒဏ်ပေးခံရမည်ဟု ရာဂျူး က ပြောထား သည် မဟုတ်ပါလား။ သူမကြောင့် ခုလို ကွဲရှသည်မှာ ပထမဆုံး။ မတော်တဆပဲလေ ဟု တွေးမိသည်။ သို့သော်…
“ဟေ့ ဘာဖြစ်တာလဲ” ဒေးဗစ် ၏ မေးသံကို ကြယ်လောင်စွာကြားရသည်။
“ဟုတ်ကဲ့၊ သခင်ကြီးဒေးဗစ်။ ကျွန်မ ချော်ပြီး လွတ်ကျသွားပါတယ်။ ဖမ်းပေမယ့် မမိလိုက်လို့ ဖန်ခွက်ကွဲသွားတာပါ ရှင့်။ မတော်တဆဖြစ်သွားတာပါ။ ခု ပဲ ရှင်းလိုက်ပါမယ်။” သူမ၏ အသံက တုန်ခါနေသည်။ ဒါလောက်နှင့် ပြီးသွား မည်ဟု လည်း မျှော်လင့်နေသည်။
“ဒီဖန်ခွက်က ငါ့အမေ အကြိုက်ဆုံး တစ်စုံထဲက ဟ။ သူဆုံးသွာကတည်းက ငါ နေ့တိုင်း ဒါနဲ့ သောက်ခဲ့တာ။ ခု ခွက် က နောက်ဆုံးပဲ။ ဘယ်လိုလုပ် အစားရမလဲ။ နင့်ကို ငါစိတ်ပျက်တယ် ထွေး။ နင့်ကို ငါ အလုပ်ကောင်းကောင်းပေး တယ်။ ဂရုစိုက်တယ်။ နင်က ခုလိုလုပ်ပစ်တယ်။ ငါ့ကို ဘာနဲ့ အလျော်ပေးမလဲ ဟေ။”
“ဆောရီးပါ သခင်ကြီးဒေးဗစ်၊ နောက် မဖြစ်စေရပါဘူးရှင်။ သခင်ကြီးက ကျွန်မအတွက် အကောင်းဆုံး အလုပ်ရှင် ပါ။ ဒီအလုပ်ကိုလည်း ကျွန်မကြိုက်ပါတယ်” ဖြေသိမ့်နိုင်မလားလို့ ကြိုးစားပြောကြည့်သည်။
“ငါ လက်မခံဘူး။ နင်တကယ် စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်လည်း မယုံဘူး။ အဲတော့.. နင် ဒီည ၇ နာရီခွဲ ငါ့စာကြည့်ခန်းထဲ လာခဲ့။ အလုပ်တွေပြီးအောင်လုပ်ခဲ့။ နင်နဲ့ တန်တဲ့ အပြစ်ပေးဖို့ ငါစဉ်းစားထားမယ်။ ကဲ။ ငါ ဒဏ်ပေးတာ လက်ခံမလား မခံဘူးလား ပြော။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ကိုယ့် အဝတ်ကိုယ်ထုတ်ပြီး ခုချက်ခြင်း ထွက်သွားလို့ရတယ်။”
ထွေး အလွန်ကြောက်မိသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ခံရတော့မည်သာဖြစ်သည်။ ခုအလုပ်မှာ သူပျော်နေပြီ။ ဒေးဗစ် သည် သူ့ကို ကြောက်လန့်အောင် တမင်ခြောက်နေသည်ဟုသာထင်သည်။ သူဌေးတွေကြားထဲမှ မနေဘူး သဖြင့် သူ နားမလည်နိုင်။ ရွေးစရာလမ်းလည်းမရှိ၊ ၁၈ နှစ်သမီး မိဘမဲ့ တစ်ယောက်အတွက် ခုလို ဆောင်းရာသီတွင် တခြား လုပ်စရာ လည်း ဘာမှမရှိ။ “ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ သခင်ကြီး။ ကျွန်မ ကျေနပ်တဲ့အထိ အပြစ်ပေးခံပါ့မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဒေးဗစ်၏ မျက်နှာကို ပြန်မကြည့်ရဲတော့ပဲ အကွဲ အစ များကို ရှင်းရန် လုပ်တော့သည်။ ခံရမှာပေါ့လေ.. ဟု တွေး မိသည်။ ရာဂျူး ပြောသလို တင်ပါးကို ရိုက်တယ် ပဲဆိုဆို ဘယ်လောက် ဆိုးမှာမို့လဲ။ လမ်းပေါ်ရောက်တာနဲ့စာရင် တော်ပါသေးတယ် ဟုတွေးနေရသည်။
ညရောက်ရင် ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ တစ်ခါတလေ တွေးပြီး ပူသော်လည်း ထွေး တစ်နေ့လုံး အလုပ်ဆက်လုပ်နေသည်။ သူ့တင်ပါးကို လက်ဖဝါးနှင့် ရိုက်ခံရနိုင်သည်။ အတော်များနာမလား။ သူခံနိုင်မလား။ စဉ်းစားရင်း ညစာကို ဖြည်းဖြည်း စားသည်။ စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့် အစာတော့မဝင်။
“အားလုံး OK ပဲလား ထွေး?”
ရာဂျူး အသံကြောင့် သူလန့်သွားသည်။ “အင်း။ ကျွန်မတော့ အခက်တွေ့နေပြီ။ သူ့အမေ စိတ်ကြိုက် ဖန်ခွက်တွေ ထဲက နောက်ဆုံး တစ်လုံးကို ခွဲလိုက်မိတယ်။ ဒေးဗစ် ဒေါဖောင်းနေတယ်။ ဒီည ဒဏ်ပေးခံရမယ်တဲ့။ သူ ကျွန်မကို မရိုက်လောက်ပါဘူးနော်။ ဘယ်လိုထင်လဲဟင်”
ရာဂျူး အံ့သြဟန်ပြသည်။ ဒေးဗစ် ဒီမနက်က သူ့ကို စာကြည့်ခန်းထဲခေါ်ပြီး အထူး စီမံထားသော ကုလားထိုင် အရှင် တစ်ခု လုပ်ပေးရန်ခိုင်းခဲ့သည်။ ခုံကို ဘယ်လို မျိုး အသုံးချဖို့ ဆိုတာ သူနားမလည်ခဲ့။ ခုတော့ သူ သဘောပေါက်ပြီ။ ဒေးဗစ် က ရိုက်ဖို့ ခုံ လိုချင်သည်ဖြစ်နိုင်သည်။ ခုံ အနေအထားကြောင့် ထွေး၏ ဖင်ကို ပေါ်လွင်အောင် လုပ်ထားပြီး ဖြစ်မည်။ ခုံမှာ တခြား ထူးခြားချက်တွေက ပါသေးသည်။ သူမ ဖင်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ထိတွေ့နိုင်အောင်။ ကိုယ် ခန္ဓာသည် အားကိုးရာမဲ့နေအောင်၊ ဘယ်လိုလုပ်လုပ် ခံရအောင် ဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီး ဒီစနေတနင်္ဂနွေ အပြီး လုပ်ခိုင်းထား သည်။ အင်း၊ ဒီည တော့ သူမ အရိုက်ခံရနိုင်သည်။ သို့သော် အစသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ပိတ်ရက်မတိုင်မီ နောက်ထပ် အမှားများ ဆက်တိုက် တွေ့တော့မှာ သေချာပါသည်။
“အင်း။ ငါ နင့်ကို ခင်ပါတယ် ထွေး၊ ပြီး တော့ ဒီမှာ နင် အလုပ်လုပ်တာလည်း အကုန် ကောင်းတာပဲလေ။ ခုတော့ နင် အရစ် ခံရပြီပေါ့။ သူဌေးတွေအကြောင်း ငါလည်း ပြောပြဘူးသားပဲ။ သူတို့က ထူးဆန်းတယ်ဟ။ ဒေးဗစ် ရဲ့ မိတ်ဆွေ တွေဆိုရင် သူ့ထက် ဆိုးတယ်။ ဒါက နင့်အတွက် ဆုံးဖြတ်ရမယ့် အချိန်ပဲ။ အနာဂတ်အတွက်လည်း စဉ်းစားရမယ်။ နင့်မှာ သွားစရာနေရာလည်းမရှိ၊ ကျောင်းကလည်း ပြန်လက်ခံတော့မှာမဟုတ်၊ ဆောင်းကလည်း ဝင်လာနေပြီ စဉ်းစား ပေါ့ဟာ။ လမ်းပေါ်မှာ ဖာဖြစ်ရတဲ့ဘဝတော့ မရောက်စေချင်ဘူး။ နင့်အသက် ၁၈ နှစ်ဆိုတော့ အဲဒါမျိုးသွားလုပ်လည်း လတ်တလောတော့ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ နောက် ၃ နှစ်လောက် ဆို လူလည်း ရစရာကျန်မှာမဟုတ်ဘူး။ နင် အဲလို တော့ မဖြစ်ချင်ဘူး မဟုတ်လား “
ရာဂျူး ပြောတာမှန်ပါသည်။ သူမအတွက် ရွေးစရာ မရှိလှ “အင်း။ ကျွန်မနားလည်ပါတယ်။ ကြောက်စရာပဲ။ ရှုင့်ကို တစ်ခါမှမပြောဘူးဘူး။ ကျွန်မဟာ အပျိုလေးပါ။ တစ်သက်လုံး ကျောင်းမှာပဲနေခဲ့ရပြီး ဘယ်ယောက်ျားနဲ့မှ လည်း မပတ်သက်ခဲ့ဘူးပါဘူး။ ဒေးဗစ် က ကျွန်မကို ကြည့်တာ က မရိုးဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာ ပွတ်တာထိတာတွေလည်း ပါလာတယ်ရှင်” ထွေး တစ်ယောက် ရာဂျူးကို ငေးရင်း ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးမလဲ စောင့်သည်။
ဒေးဗစ် သည် အပျိုစင်လေးကို စားပေတော့မည်။ ငါလည်း သူ့ ဟာလေးကို တွယ်ချင်လိုက်တာ။ ဟင်း.. သူဌေး ငမိုက် တွေ။ အပျိုစစ်တွေဆို သူတို့ပဲ စားရတယ်။ ဒီကလေးမလည်း မကြာခင် အတွယ်ခံရတော့မယ်။ တစ်ကိုယ်လုံး ရှိသမျှ အပေါက် တွေ အားလုံး ဒေးဗစ်ပစ္စည်း အထည့်ခံရတော့မှာသေချာတယ်။ ပြီးရင် သူ့သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့တွေ့မယ်။ ဟိုလူတွေက အင်မတန်ဆိုးတဲ့လူတွေ။ ဒေးဗစ်ထက် ကြမ်းတမ်းတယ်။ သူတို့ ပါတီတွေမှာ ငါတွေ့ဘူးတာ ဖာသည်မတောင် ကြောက် လန့်ပြီး ခံရရှာတယ်။ အင်း သူလိုးပြီးရင်တော့ ငါ့ကို လည်း အခွင့်အရေးပေးအုံးမယ် ထင်ပါရဲ့။ အင်း… “နားထောင်စမ်း ထွေး၊ ငါ နင့်ကို ထပ်မပြောချင်တော့ဘူးဟာ။ သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်။ ကန့်လန့်မတိုက်နဲ့။ နက်ဖြန် မှတွေ့ကြသေးတာပေါ့” ရာဂျူး ထွက်ခဲ့သည်။ လီးကတောင်နေသည်။ ကံကောင်းတဲ့ ငနဲတွေ ပါလား။ ရိုက် ဖို့ ခုံ လုပ်ပေးရင်းကို တွေးရင်း တင်း လာနေသည်။ အရင် လုပ်ဘူးသည့် ခုံ တွေနဲ့မတူအောင် ပို ကောင်းအောင် လည်း လုပ်ထားရာ ဒေးဗစ် ကြိုက်မည်မှာသေချာသည်။ တစ်ခါတလေ တော့ ထွေးကို ဒီခုံ မှာ သူ့လက်ထဲများ ထည့်လေမလား ..။ ရာဂျူးစိတ်ကူးယဉ်နေမိသည်.
ထွေး အခန်းသို့ပြန်ကာ သန့်ရှင်းသည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မှန်ထဲကြည့် အကျီ င်္၊ စကတ်၊ ဒေါက်ဖိနပ်၊ ခြေအိတ်နက် အားလုံး ကောင်းပါသည်။ ဒေးဗစ်သည် သူ့ကို ကြည့်ပြီး သနားလောက်ပါသည်။ စာကြည့်ခန်းဖက်သို့ ဆင်းလာခဲ့ သည်။ ဒေးဗစ် သည် ခန့်ညားသော ထိုင်ခုံကြီးပေါ်တွင် ထိုင်နေသည်။ ခြေထောက်က ရှေ့က ခုံလေးမှာ တင်ထားသည်။ သူမဝင်လာသောအခါ ဖတ်လက်စ သတင်းစာကို ချလိုက်သည်။ သူသည် ဝတ်စုံပြည့်နှင့်။ “ကျွန်မ အပြစ်ပေးခံဖို့ လာတာပါ သခင်ကြီး။ ကျွန်မ လုပ်ခဲ့မိတာ အပြစ်ရှိတဲ့အတွက် သခင်ကြီးပေးတဲ့ အပြစ်ကို ခံပါ့မယ်” လျှော့လျှော့ပေါ့ပေါ့ဖြစ်စေရန် ကြိုးစား၍ ပြောရှာသည်။
ဒေးဗစ် က သူမကို ခပ်တည်တည်ကြည့်နေသည်။ “ဒါ နင့်အတွက် ပထမဆုံး အမှားပဲ ဆိုတာ ငါလည်းနားလည်ပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကို ပေါ့ပေါ့ထားလိုက်ရင် နောက်ထပ် ဆက်ဖြစ်လာမှာ စိုးရိမ်ရတယ်။ ငါက စည်းကမ်းနဲ့ ပတ်သက်ရင် အလျှော့ပေးတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူး။ အဲတော့ အပြစ် ပေးမှသာ မသင့်တော်တာတွေ ဆက် မဖြစ်မှာလို့ပဲ ယုံကြည်တယ်။ အဲဒီတော့ နင်ဒီည အရိုက်ခံရတော့မှာပေါ့” ဒေးဗစ် ခုံမှ ထကာ “နင် ဒဏ်ပေးခံမယ် မဟုတ်လား”
ထိုခဏလေးသည် ထွေး၏ ဘဝ အတွက် အဆုံးအဖြတ်ပင်ဖြစ်သည်။ ငြင်းလိုက်သည်နှင့် သူမဘဝသည် လမ်းပေါ်တွင် ဘာဆက်ဖြစ်မည် မသိ၊ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆိုလျှင် ယခု အလုပ်တွင် တည်မြဲနေမည်။ သူမ ဘာကြောင့် အလျှော့ပေးရမည် နည်း။ သူမ အလုပ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အခြေအနေအားလုံးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရပေမည်။ ခု သူမကို ရိုးရိုး တန်းတန်း ရိုက် မှာ မဟုတ်မှန်းသူ နားလည်သည်။ ဤသည်မှာ အစသာ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒေးဗစ် တွင် သူမအား တခြား ရည်ရွယ်ချက် များရှိမှန်း သူမ မကြိုက်တာတွေ လုပ်ရဖို့ ရှိနိုင်မှန်း သိသည်။ သို့သော်.. “ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ သခင်ကြီးဒေးဗစ်” သူမအနာဂတ် လမ်းတစ်ခုကို ရွေးလိုက်သည်။
ဒေးဗစ် က အဖြေအတွက် ပြုံးပြီးကျေနပ်နေသည်။ သူ မ ကို သူပိုင်သွားပြီ။ သူမအား ကြည့်ဖို့၊ ထိဖို့ အတွက် အကြောင်း ပြနေစရာမလိုတော့။ ဖြည်းဖြည်းချင်း လုပ်မည်၊ တွန်းပို့မည်၊ ကြောက်လာအောင် လုပ်မည်။ “အနားလာခဲ့ ထွေး၊ ငါ့အနားကပ်စမ်း” လက်တကမ်းကို ခေါ်သည်။
ထွေး တစ်ယောက် လက်နှစ်ဖက် ဘေးချလျက် ဒေးဗစ် ရှေ့တွင် ရပ်နေသည်။ သူ၏လက်များက သူမကို ကိုင်တွယ် နေသည်ကို ခံစားရသည်။ ခါးကို သေချာ ကိုင်ကြည့်နေသည်။ သူ့လက်များက သူမ၏ ခါးထက်ပင် ကြီးမားနေသလို ရှိသည်။ သူမ ဖြည်းဖြည်းချင်း တုန်လှုပ်လာသည်။ လက်များက သူ့ကို လှည့်ခိုင်းနေသည်။
“လှည့်လိုက်စမ်း။ ဟုတ်ပြီ” ဒေးဗစ် လက်များက စကပ် အပေါ်နားကို အသာကိုင်လိုက်ပြီး တင်ပါးအတိုင်းဖြည်းဖြည်း ချင်း လျှောဆင်းသွားသည်။ “ငြိမ်ငြိမ်နေနော်” လက်များက ဖင်ကို သေချာကိုင်တွယ်သည်။ “နင့်ဖင်က လုံးနေတာပဲ ထွေး၊ အတီးခံဖို့ လုပ်ထားတာလား။ နင် အရိုက်ခံရဘူးလား”
“ဟင့်အင်း၊ သခင်ကြီး” သူမ ချိုသာစွာဖြေသည်။ “တခြားမိန်းကလေးတွေတော့ ဦးဖေခင် ရိုက်တာ ခံရဘူးပါတယ်။ ပြန်တော့ ပြောမပြကြဘူး။ ကျွန်မတော့ ကံကောင်းလို့ တစ်ခါမှ မခံခဲ့ရပါဘူး။”
မဟုတ်ပါ။ သူကံကောင်းသည်မဟုတ်။ ဦးဖေခင် သည် ဒေးဗစ်အတွက် စုဆောင်းထားခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်။ တခြား မိန်းကလေးတွေ ဖင်လှန်အရိုက်ခံရသည်။ ကြိမ်ဆော်ခံရသည်။ နောက်ဆုံး သူတို့၏ အပျိုရည်ကို ဦးဖေခင်ထံ ပေး ကြရသည်။ မိဘမဲ့ကျောင်းမှမိန်းကလေးများစွာသည် သူတို့၏ အပျိုပါးစပ်၊ အပျိုအဖုတ်နှင့် အပျိုဖင် တို့ကို ပြင်းထန်စွာ ဖင်လှန်ရိုက်ခံရခြင်းနှင့် ကြိမ်လုံးစာမိခြင်းတို့ နောက်တွင် ဦးဖေခင်၏ စားပွဲပေါ်၌ ပေးခဲ့ကြရသည်။ “နင်လည်း ဒီမှာတော့ သိပ်ကံမကောင်းနိုင်တော့ဘူး ထွေး။ ရက်တောင်သိပ်မကြာသေးဘူး နင် အဆော်ခံရတော့မယ်” သူ့လက်ချောင်းများက သူမ၏ တင်ပါးများကို ပွတ်နေသည်။ ဖင်တစ်ခုလုံး ကို လုံးခြေနေသလို ကိုင်သည်။ “တစ်ပတ်လှည့် လိုက်အုံး” လက်များကတော့ မဖယ်။ “နင့် အကျီ င်္နဲ့ ရှုပ်မနေစေချင်ဘူး။ ချွတ်လိုက်စမ်း” မေးခွန်း မဟုတ်၊ အမိန့်ပေးခြင်းသာဖြစ်သည်။
ထွေး သည် ဒေးဗစ် ရေချိုးနေစဉ် က ရှေ့တွင် အင်္ကျီချွတ်နေဘူးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် ယခုတစ်ခါတွင် ယခင် လို မဟုတ်တော့မှန်း နားလည်သည်။ သူမ တင်ပါးပေါ်တွင် အေးဆေးစွာပွတ်သတ်နေသော လက်များက သူမအပေါ် ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကိုပြနေသည်။ သူမသည် ဒေးဗစ် ၏ မျက်လုံးများအောက်တွင် ကြယ်သီးများကို ဖြေးဖြေးချင်း ဖြုတ် နေသည်။ လက်မောင်းနှင့် ပုခုံးပေါ်မှ အသာကျော် ချွတ်လိုက်သည်။ ဒေးဗစ် ကြည့်နေစဉ် အကျ င်္ီကို အသာကိုင်ထား သေးသည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ငုံ့ကြည့်သောအခါ ပိုး ရင်စည်း အောက်မှ ရုန်းကန်ထွက်နေသော နို့သီးခေါင်းများကို မြင်ရသည်။ ဒေးဗစ် က အင်္ကျီကို လှမ်းယူပြီး ဘေးရှိခုံပေါ်တွင် တင်ထားလိုက်သည်။
“နင့်နို့တွေက ငယ်သေးပေမယ့် နို့သီးခေါင်းတွေက ကြီးသားပဲ။ ဟုတ်လား။ ချွတ်ပြစမ်းပါအုံး ကြည့်ရအောင်” ဒေးဗစ် က ပြောရင်း သူမရှက်နေသည်ကို ကြည့်ရင်းပြုံးနေသည်။
“ပြဖို့တောင် မလိုလောက်ပါဘူးသခင်ကြီး။ ကျွန်မမှာ နို့သီးခေါင်းကကြီးပါတယ်။ ပိုးစကြောင့် ထောင်ထွက်နေတာပါ” သူရှက်ရှက်နှင့် အော်မိသည်။ ဘာကြောင့် ခုလို ဇွတ်ပြောမိသည် မသိ။ ဟုတ်ကဲ့ ဟုရိုးရိုးပြောလိုက်ရင်လည်း ရသားပဲ ဟု တွေးမိသည်။
“အေး။ စကတ်ဝတ်ထားရင် ရိုက်တဲ့အခါ နင်သိပ်နာမှာမဟုတ်ဘူး ချွတ်အုံးမှဖြစ်မယ်။ လှည့်လိုက်စမ်း။ ငါချွတ်ပေး မယ်” သူ့လက်များဖြင့် အသာဆွဲလှည့်ရင်း “မှန်ကို သေချာကြည့်ထား။ ငါ ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာ နင်မြင်မှ ဖြစ်မယ်” အမိန့်ပေးသည်။ သူမရှေ့တွင် ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ကြီးတစ်ခုရှိနေသည်။ တစ်ခါမှ သတိမထားမိခဲ့။ ခုမှ ဒီမှန် ကြီး ရှိနေခြင်း၏ အဖြေကို နားလည်ရတော့သည်။ သူမဖင်လုံးပေါ်တွင် လက်များက တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို ပွတ်သတ် ပေးနေသည်ကို မြင်ရသည်။ ကြယ်သီးများဆီသို့ ရွေ့သွားပြီး သုံးလုံးလုံး ဖြုတ်ပြီးသောအခါ စကတ်ကို ဖြည်းဖြည်း ချင်းချွတ်ချလိုက်သဖြင့် သူ့ခြေထောက်ပေါ်သို့ ပြုတ်ကျလာသည်။ ငုံ့ကြည့်လျှင် ရင်စည်းနှင့် ပိုးခြည်ဖြင့် တွဲထားသော အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုမြင်ရသည်။
“သေချာ ရှေ့ကိုကြည့်နေနော်။ စကားနားမထောင်ရင် အပို ပြစ်ချက်တွေ တိုးလာမယ်” သူ့ဖက်သို့ အသာလေး လှည့် ကြည့်လိုက်သော တောင်းပန် မျက်လုံးများကို မြင်လိုက်သဖြင့် စကားသံထွက်လာသည်။ သူသည် ပိုး ဘောင်းဘီ အောက်မှ ဖင်များကို ကြည့်နေသည်။ သူမက လှတော့ လှသည်။ ဒေါက်ဖိနပ်ကြောင့် မြင့်နေသော ခြေထောက်များမှ အနက်ရောင်ခြေအိပ်များတွင် ပေါင်သားတို့သည် တောက်ပလျှက်။ ဘောင်းဘီထဲအစွန်းတွင် တိုးထွက်နေသော အနီရောင် စောက်မွှေးလေးများကိုပင် မြင်နေရသည်။ ဒီညတော့ သူ အတွင်းခံကို ချွတ်ဖို့ စိတ်မကူး။ နောက်တစ်ကြိမ် မှာ တစ်ဆင့်တိုး လာဖို့ ချန်ထားသည်။ နောက်ဆုံးချိန်ထိ အရသာကို တိုးတိုးခံစားရမည်ဖြစ်သည်။
အပြစ် ဘယ်လိုတိုးတိုးခံရဦးမည်လဲ။ သူမသည် ခါးကို ဆန့်ထားသည်။ ပိုးဘောင်းဘီ တလျှောက် လက်များက ပွတ်သတ်နေသည်။ ဖင်လုံးများအား လှုပ်ခါကြည့်နေသည်။ ဖင်ကြားထဲ လက်ထည့်သောအခါ ဖင်ကိုအသာစေ့ ထားမိသည်။ လက်များကအတင်းမတိုး။ ပတ်ဝှေ့သွားနေသည်။ နောက်တော့ ဘောင်းဘီအောက် မှ ပေါင်သားများ ပေါ်သို့ ရောက်သည်။ ပေါင်ကြားတလျှောက် ပွတ်နေပြန်သည်။
“ခြေထောက် ကိုချဲလိုက်စမ်း ထွေး” ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်ကို လွန်ခဲ့ပြီမို့ သူမသည် အမိန့်နာခံရန်သာရှိတော့သည်။ လက်များက ပေါင်ကြားကို တွန်းထိုးပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း ကားသွားအောင် လုပ်ပေးသည်။ “ကားအုံး။ နင်ဒီထက် ပို လို့ရပါသေးတယ် ထွေးရဲ့” ပေါင်များပိုကားလာအောင် ကြားထဲကို လက်ထည့်ပြီးတွန်းပေးသည်။ “နည်းနည်း ပို လိုက် အုံး။ ခုပုံမျိုး မှန်ထဲမှာမြင်ရတာ ကြိုက်ရဲ့လား ထွေး?”
ထွေး ခြေထောက်ကို ပိုချဲ့လိုက်သည်။ ခုဆိုလျှင် ၂ ပေခန့် ကားထားပြီးပြီ။ ပေါင်ကြားများသည် ဒေးဗစ်၏ သေချာ ပွတ်ပေးမှုကို ခံနေရသည်။ တစ်ဝက်တစ်ပျက် တုံးလုံးဖြစ်နေသော သူ့ပုံရိပ်တွင် ဘော်လီအောက်မှ ထောင်နေသော နို့သီးခေါင်းမာမာလေးများ၊ ပိုးသား ပင်တီ အဖြူရောင် နှင့် ခြေအိတ်ကို ဆွဲထိန်းထားသော ခါးပတ်စများ ကို မြင်နေရသည်။ သူ့မေးခွန်းကို ဘယ်လိုဖြေရမယ်မှန်းမသိ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လှသည်ဟု တစ်ခါမှမထင်ခဲ့ဘူးပေ။ သူမသည် သာမာန်ရုပ်ရေသာရှိသည်။ နို့အုံများက သေးငယ်သည်။ သို့သော် ဖင်ကကြီးသည်။ “သခင်ကြီး ကျေနပ် ရင် ပြီးတာပါပဲရှင့်” ခုလိုဖြေရင် သဘောကျမည်ဟု ထင်သည်။
“ငါ ကျေနပ်အောင် အမြဲလုပ်နေရင် ခုလို ရိုက်စရာ အကြောင်းမပေါ်ဘူး။ ကဲ ခုတော့ အချိန်ကျပြီ။ ဆိုဖာခုံပေါ်တက်လိုက် စမ်း။ ဒီဖက်ကို။ ဟုတ်ပြီ ဒူးထောက်လိုက်။ မှန်ဖက်ကို ကြည့်ထား” ဒေးဗစ်၏ လက်များက သူလိုချင်သည့် ပုံစံအတိုင်းပြင်ပေးသည်။
ဒေဗစ်လိုချင်သည့် ပုံစံအရ ထွေး သည် မှန်ကို မျက်နှာမူလျက် ထိုင်ခုံပေါ်တွင် လေးဖက်ထောက် အနေအထားဖြစ် သွား သည်။ မေးစေ့ကိုလက်ဖြင့် ပင့်တင်ပြီး သူမ ဘယ်လို လုပ်ခံရသည်ကို ကိုယ်တိုင် မြင်စေရန် မှန်ကို တည့်တည့် ကြည့်စေသည်။ ပေါင်များကို ပွတ်ပြီး ထပ်ကားအောင် လုပ်နေသည်ကို မြင်ရသည်။
“ဟုတ်ပြီ။ အကျယ်ဆုံးထိအောင် ပေါင်ကိုထပ်ကားလိုက်စမ်း။ ခုံနဲ့ ထိသွားအောင် ကြိုးစား။” ကားပြီး မှောက်ချလိုက် ရာ တကိုယ်လုံး ဖွင့်ပေးထားသလိုဖြစ်သွားပြီ “ဟုတ်ပြီ။ ကောင်းတယ်” ကျောကုံးကို အသာဖိချပြီး ခေါင်းကို ထောင် ပေးသည်။ နောက် ဗိုက်အောက်မှ လက်လျှိုကာ ဖင်ကို မြောက်နေအောင် ပြန်လုပ်သည်။ “ကဲ ဒီအတိုင်းနေ။ ထပ် မလှုပ် နဲ့တော့။ ပုံစံပြောင်းသွားလို့မရဘူးနော်” သူ မြင်ချင်သည့် ပုံအတိုင်း မြင်ရ၍ သဘောကျနေသည်။
သူမသည် လေ့ကျင့်ထားသော ခွေးလေးပမာဖြစ်နေသည်။ မှန်ထဲတွင် ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်မယုံချင်။ ဖင်က မြောက် တက်နေသည်။ ပေါင်တွေကကားနေသည်။နောက်က ကြည့်လျှင် ဘယ်လိုမြင်ရမည်ကို စဉ်းစား၍ရသည်။ အလိုးခံရန် အသင့်ဖြစ်နေသည့် ဖာသည်မလေးပမာပင်တည်း။ လက်များက ဖင်ကို လာပွတ်ပြန်သည်။ သူမ အဖုတ်ထဲမှာ အရည်တွေ ထွက်လာသည်။ ဘုရားဘုရား။ ငါ အရည်ရွှဲလာတာ သူမသိပါစေနဲ့။
ထွေး ကိုနောက်ကကြည့်ရသည် မှာ အတော်ပင် ဆွဲဆောင်မှုရှိလှသည်။ ကားထားသော ပေါင်များကြားတွင် စောက်မွှေးလေး များပြူထွက်နေသည်ကို ပင်မြင်ရသည်။ ဖင်ကလည်း ထောင်လျှက်။ စနေနေ့ဆိုလျှင် သူ့အတွက် ခုံ အသစ်ရမည်။ ဒီထက်ပိုကောင်းသော position ကို ချိန်လို့ရပေမည်။ သူ့လက်များက ဖင်ကို ပွတ်ပြန်သည်။ ဖင်ကြားက စေ့ထားသည်။ “ငါ့ပစ္စည်း ကို တန်ဖိုးထားတတ်အောင် သင်ပေးရမှာပဲ” ပထမဆုံး လက်ဝါးက သူမ၏ ညာဖက် တင်ပါးပေါ်သို့ကျ လာသည်။ ဖြန်းကနဲရိုက်သံသည် စာကြည့်ခန်းထဲတွင် ပဲ့တင်ထပ်သွားသည်။
“အား” သူမ၏ ဖင်နုနုပေါ်သို့ ရိုက်ချက်သည် အရိုးမှသည် ဦးဏှောက်ထိ ရောက်သွားသည်။ လှုပ်ဖို့ ကြိုးစား သော် လည်း ဒေးဗစ်၏ လက်များက တင်ပါးဆုံကို မြဲမြဲကိုင်ထားသည်။ အရိုက်ခံထားရသော တင်ပါးကို ပွတ်နေပြန်သည်။ နောက်တစ်ချက် “အား” ဒီတစ်ခါ ဘယ်ဖက် တင်ပါး။ လက်က ပွတ်ရင်း ဖင်ကို မြှောက်ပေးထားသည်။
“အများကြီးကျန်သေးတယ်။ ဖင်ကို ပြန်မြှင့်ထားစမ်း။ ထောင်ထား” “ခြေထောက်ကို ထပ်ကားအုံး” ပေါင်ကြားထဲက လက်များက ပိုကားအောင် ချဲ့နေသေးသည်။ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို တစ်ချက်စီ အမြန်ထပ်ရိုက်လိုက်သည်။ နောက် ဆက် ပွတ်ပေးနေသည်။ ဘောင်းဘီ အနားစွန်းတွေကို ပွတ်နေခြင်းဖြစ်ရာ ကားသော ပေါင်ကြားထဲသို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း လိတ် ဝင်သွားသည်။ ပင်တီတွေ စိုရွှဲလာနေသည်ကို မြင်နေရသည်။ ဒီတစ်ခါ ၂ ချက် ထပ်ရိုက်သောအခါ ရိုက်ချက် သည် ဘောင်းဘီပေါ်မဟုတ်တော့။ ပေါ်လာနေသော ဖင်သားများပေါ် ဖြစ်နေပြီ ။ ဖင်များ က လိုးချင်စရာ တုန်ခါ နေသည်ကို စိုက်ကြည့်နေသည်။ နောက် ထပ် နှစ်ချက်။ “ကောင်းတယ် ထွေး “ လက်များက ပေါင်ကြားထဲရောက်လာ ပြီး အတွင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်ကို ရိုက်သည်။ ပေါင် က ပိုကားသွားကာ ပင်တီ ထဲမှ အမွှေးတွေ ပို ထွက်ကျလာသည်။ သူ့လက်ချောင်းများက ဘောင်းဘီ ခလယ်စွန်းကို ဆွဲလိုက်သဖြင့် ဖင်ကြားထဲညပ်နေသလို ဖြစ် လာသည်။ အဖုတ်ကြား ညပ်နေသော ဘောင်းဘီစမှတစ်ဆင့် သူ့လက်ချောင်းများ စိုလာသည်။ “နင် အဆော်ခံရတာ နဲ့ အဖုတ်တွေရွှဲနေပြီ။ ဟုတ်လား ထွေး?”
ထွေး ဒေးဗစ် ကို မှန်ထဲမှကြည့်ရင်း ရှက်လှသည်။ သူမရွှဲနေမှန်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားနေမှန်း သူသိနေပြီ။ ခုလိုပုံစံမျိုး လုပ်ခိုင်း ၍ စိုလာသည်လား ရိုက်ခံရလို့ စိုသည်လား သူမ မသိ။ သို့သော် နောက်ထပ် ရိုက်ချက်ကို ဆက်ခံရဖို့ သေချာသည်။ “တော်ပါတော့ သခင်ကြီး” လေသံဖြင့် ပြောသည်။ “ကြောက်ပါပြီရှင်”
ဒေးဗစ် လက်တစ်ဖက်က ဗိုက်အောက်ကို ထပ်ဝင်လာပြီး ဖင်ကို မြောက်အောင် တွန်းတင်ပြန်သည်။ နောက်ထပ် နှစ်ချက် အမြန်ရိုက်သည်။ သူမ၏ နာကျင်မှု နှင့် ညည်းတွားသံများနောက်တွက် သူ့လီးက တောင် နေပြီ။ သူ့လက်များက ပေါ်နေသော ဖင်သားများကို ပွတ်နေသည်။ လက်ချောင်းတို့သည် အပျိုလေး၏ လုံးကျစ်သော ဖင်များကြားသို့ ဝင်သည်။ ဒီတစ်ခါတွင် ဖင်သည် စေ့မထားတော့။ ပို၍ အတွင်းကျသော နေရာများထိ လွယ်လွယ် ကိုင်၍ ရလာသည်။ “ဟုတ်ပြီ ထွေး၊ လျှော့ထား။ အဲလိုဖြစ်ရမှာပေါ့” သူ့လက်ချောင်းက ဖင်ကြားထဲသို့တိုးလာသည်။ ဘောင်းဘီကို ဖင်ကြားထဲ ပိုတိုးထည့်လိုက်သည်။ ဖင်ကြားက ညှစ်လိုက်သည်ကို လက်များက သိလိုက်သည်။ လက်က ပေါင်ကြားကို ပိတ်ရိုက်လိုက်သည်။ အရမ်းကို ကားစန့်သွားသော ပေါင်များကြားမှ ပင်တီကို ပွတ်သည်။ ချိုင့်နေသော နေရာလေးနားတွင် စက်ဝိုင်းပုံ ပွတ်ပေးနေသည်။ ဖင်ပေါက်လေးကို ပွတ်သောအခါ တုန်လှုပ်သွားသည် ကို ခံစားမိသည်။ “ဖင်ဝကို ထိုးတာ ကြိုက်ပုံရတယ်။ ဟုတ်လား ထွေး” လက်က ဖင်ကြားထဲ ဘောင်းဘီစခံလျက် တိုးဝင်လာသည်။ သူမကိုယ်ခန္ဓာက ပြန်ညှစ်ထုတ်သည်။ သို့သော် အခြားလက်တစ်ဖက် ရှေ့မှ ပြန်တွန်းနေသည်။ နောက် ထပ် ၂ ချက်ရိုက်ပြန်သည်။ ဖင်ကြားထဲသို့ပင် ထိအောင် ဆော်သည်။
ထွေး သည် သူမဖင်ကြားမှ လက်များကို ခံစားမိနေသည်။ သူ့ဖင်ကို လျှော့ချထားလိုက်ခြင်းဖြင့် လက်ထိုးထည့်မှု ကို ဖွင့်ပေးထားသလိုဖြစ်နေသည်။ လက်က ဖင်ကြားထဲ ပိုတိုးဝင်နေသည်။ သူဘာဆက်လုပ်မည်ကို မသိသော်လည်း ဖင်ဝကို ကစားနေမှုတွေင် သူမ စိတ်လှုပ်ရှားနေသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ သူ့ကိုယ်က ပြန်ညှစ်ထုတ်တော့ ရှေ့က လက်တွေက ပြန်တွန်းပြန်သည်။ မှန်ထဲမှာမြင်နေရသည်။ ဒေးဗစ်သည် သူမ၏ မည်သည့် တွန်းလှန်မှု ကိုမျှ မလိုချင်။ နောက်ထပ် ၂ ချက်ရိုက်ပြန်သည်။ ဖင်နှိုက်၍ သူဘယ်လို ဇိမ်ကျသည်တော့မသိ။ သူမကိုယ်မှာ ကြောက်လန့်မှုက ပြည့်နေသည်။ လက်က အောက်ဖက်ပိုရွေ့ကာ အဖုတ်ပေါ်သို့ အုပ်ကိုင်လာသည်။ လက်မက အဖုတ်ထဲ တိုးဝင်သည်။ လက် နှစ်ချောင်း ရှေ့နောက်ထိုးကိုင်ထားမှုမှာ ဘောလုံးညှစ်ထားသလိုဖြစ်နေသည်။
ဒေးဗစ် က သူမ၏ အဖုတ်ကို ဆုတ်ပြီး နောက်ကို ဆွဲခြင်းဖြင့် ပွင့်အောင်လုပ်နေသည်။ “လေးချက် ကျန်သေးတယ်။ နှစ်ခါစီပေါ့။ ဒီတစ်ခါ အဖုတ်ကို တီးမယ်။ ပွင့်အောင်လုပ်ထား။” လက်များက ပေါင်ကြားကို တွန်းကားကာ လုံးဝ ဖွင့် ပေးထားသည်။
ထွေး သည် နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်ရိုက်ချက်များအတွက် စိတ်ကိုတင်းထားသည်။ အဖုတ်ကိုရိုက်မည်ဆိုသည်ကို မည်သို့ မျှ နားမလည်၊ သို့သော် သူ့ကို ထားထားပုံက သေချာပေါက်လုပ်မှာမှန်း သိသာသည်။ အဖုတ်သည် နူးညံ့သော အစိတ်အပိုင်းမို့ လန့်လည်းလန့်သည်။ ပို၍ပင် စိုရွှဲလာသည်။ နာတော့မည်မှန်းလည်း သိသည်။ သိရင်းပင် အရသာ တွေ့သလိုဖြစ်နေသည်။ နှစ်ချက် ဆက်တိုက် တီးခံရပြီ။ စိုနေသော ဘောင်းဘီစ ကို အဖုတ်သွင်းရိုက်သွင်းလိုက် သလို။ “အိုး။ အား။ ဘုရားဘုရား။ ကြောက်ပါပြီ”
ဒေးဗစ် လက်များ သူမ၏ အဖုတ်မှ အရည်များကြောင့် စိုကုန်သည်။ စိုနေသော ဘောင်းဘီ ပေါ်မှ အဖုတ်ကို ဆက်ပွတ် ပေးနေခြင်းဖြင့် နာကျင်မှုကို ဏှာ စိတ်သို့ပြောင်းပေးနေသည်။ မိန်းမပျိုလေးများသည် သူတို့၏ ဏှာ အင်္ဂါ များအား အလွန် နှုးညံ့ အထိမခံ ဟုထင်တတ်ကြသည်။ ဒေးဗစ်ကတော့ ယင်းတို့သည် အကြမ်းပတမ်း အပြစ်ပေး ခံရဖို့ လုပ်ထားသည်ဟု နားလည်သည်။ ထူသော အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများနှင့် ပန်းရောင်အတွင်းသားများ ကို ရိုက်ပြီး တုန့်ပြန်မှုကို ကြည့်သည်။ နောက်တစ်ခါရိုက်လို့ရမည့် အချိန်ကို စောင့်ကြည့်နေသည်။ မကြာပါ။ သူမသည် ပြန်ကား သွားကာ နောက်တစ်ကြိမ်အတွက် စောင့်နေလေပြီ။ “နှစ်ချက်ပဲ ထွေး၊ နင်က အတော်ရွှဲနေပြီ။ ပြီး သွားတော့မယ် ထင်တယ်။ အရိုက်ခံရရင် ပြီးတယ်ပေါ့။ ဟုတ်လား”
ထွေး ရှေ့မှ မှန်ကိုကြည့်ရာ သူ့မျက်လုံးမှ ရမ္မက် အပြင် ရိုက်လိုက်တိုင်း ညဝတ်အင်္ကျီအောက်မှ တိုးထွက်နေသော လီးကြီး တောင်တက် တက် သွားသည်ကို မြင်နေရသည်။ နောက်ဆုံးရိုက်ချက် နှစ်ချက်ကို အနှေးပြကွက် ကြည့်ရ သလို မြင်လိုက်ရသည်။ လက်ဖဝါးသည် သူမ ဖင်နောက်တွင် ပြောက်ကွယ်သွားသည်ကို မြင်ရပြီး ခဏအတွင်း အလွန် အမင်း နာကျင်မှုသည် အဖုတ်နှုတ်ခမ်း မှသည် အတွင်း အင်္ဂါများအထိ ပျံ့နှံ့သွားသည်။ “အား” သူမ ဟစ်၍ အော်သည်။ သို့သော် ဖင်ကို ထောင်လျက် အနေအထားမှ မပျက်။
ဒေးဗစ် က လက်များကို အဖုတ်ပေါ်တွင် ကစားနေသည်။ လက်မက အဖုတ်တွင်းဝင်နေသော ရွှဲနေသည့် ဘောင်းဘီ ကို အထက်အောက် သွားနေစေသည်။ သူ မ အဖုတ်သည် ပြီးမည့် အချိန်ကို မျှော်လင့်နေမှန်းသိသည်။ ခုတော့ ဘယ် ရမလဲ။ သူမကို သူ ပြီးအောင် လုပ်မှာပေမယ့် ယခု မဖြစ်စေရပေ။ သူမကို ရွှဲနေသော အခြေအနေတွင် ထားပြီး သူ လို သလို ဆက်လက် သုံးစွဲဦးမည်သာ။ “ညည်း မဆိုးဘူး။ ဒဏ်ပေးတာကို ကောင်းကောင်း ခံတယ်။ ကဲ အခု သင်ခန်းစာ ရထားပြီဆိုတော့ အိမ် ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ဘာတွေ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိလောက်ပြီ။ နောက်ဆို ငါ့စကား အတိုင်း သေချာ နေတတ်ထိုင်တတ်ပြီဖြစ်မယ်။”
ထွေး တစ်ယောက် အရမ်းကို ပြီးချင်နေသည်။ သူမသည် ဒေးဗစ်၏ အမိန့်အတိုင်းသာ လုပ်ရကိုင်ရ နေထိုင်ရမည် ကိုလည်း သိသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ရမှာပေတည်း။ ထရပ်လိုက်ရင်း ဝတ်စုံအောက်မှာ လီးတောင်ထွက် နေသော သူ့ပုံရိပ်ကို မှန်ထဲတွင်တွေ့ရသည်။
“ညည်း မအိပ်ခင် တစ်ခု ပြောထားအုံးမယ်။ ထွေး၊ ခုကစပြီး ငါညဖက်ရေချိုးရင် လာစရာမလိုတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် မအိပ် ခင် ငါလိုတာ လုပ်ပေးရမယ်။ကဲ ထပြီး ဒီနားလာစမ်း။ ငါ ညည်းကို ဒီည တစ်ခုသင်ပေးစရာရှိသေးတယ်။ ငါ့ အတွက် ဇိမ်ကျအောင် လုပ်ပေးရမှာ။ လုပ်ပေးမယ် မဟုတ်လား ထွေး”
ဒေးဗစ် ပြန်ထိုင်သည်။ ထွေး ဆိုဖာမှ ထလာသည်ကို ကြည့်နေသည်။ သူမသည် အလွန် sexy ဖြစ်နေသည်။ သူ၏ ရိုက်ချက်များကြောင့် ချွေးများပြန်ကာ အသားက ပို၍ စိုနေသည်။ ကားနေအောင် အကြာကြီး ကုန်းထားရာမှ ထလာရ ၍ ဖြေးဖြေးချင်း လှုပ်ရှားနေရသည်။ ဖင်ရိုက်ချက်များအား ဘောင်းဘီစိုစိုဖြင့် ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် လှုပ်တိုင်း နာနေသည်။ သူမကိုယ်ပေါ်မှာ ဘော်လီ၊ ခါးစည်း၊ ပင်တီ၊ ခြေအိပ်နှင့် ဒေါက်ဖိနပ် တို့ သာရှိသည်။ ဒေးဗစ်က ဆိုဖာခုံ ကို ဆွဲဖယ် လိုက်ကာ သူ့ရှေ့တည်းတည့်တွင် ခေါင်းအုံးတ်တစ်လုံးကို ချထားလိုက်သည်။ “ဒီကိုလာ ထွေး” လက်ယပ် ခေါ်သည်။ “ဒီခေါင်းအုံးပေါ်မှာ ဒူးထောက်လိုက်စမ်း။ အေး ။ ဟုတ်ပြီ” လက်များက ပုခုံးကို ကိုင်၍ ထိုင်ခိုင်းသည်။
သူမသည် ဒေးဗစ်ရှေ့တွင် ဒူးထောက်ရင်း ကြောက်စိတ်ဖြင့် တုန်ရင်နေသည်။ သူမ ဘာလုပ်ပေးရမည်တော့သေချာ မသိ။ သို့သော် ဖြစ်နိုင်သည်မှာ သူ့လီးကို တစ်ခုခု လုပ်ပေးရပေတော့မည်။ လက်ကိုသုံးခိုင်းမလား။ ပါးစပ်နှင့်လား။ တစ်ခုမှ သူမလုပ်ဘူး။ သူ့ခြေထောက်က သူမပေါင်ကြားသို့ဝင်လာပြီး ကားခိုင်းနေပြန်ပြီ။
“ပေါင်ကားပြီး ထိုင်စမ်း။ နင့်ခြေထောက်တွေကားထားတာ ငါသဘောကျတယ်။ ဟုတ်ပြီ ထွေး” ပေါင်ကြားသို့လည်း ထိုးသေးသည်။ “နင် စိုရွှဲနေတုံးပဲ ထွေး၊ ဒီတစ်ခါက ငါ့ကို ပြုစုပေးဖို့ပဲ။ ငါ့ လီးကို ဘယ်လို အရသာရှိအောင် လုပ်ပေး ရတယ်ဆိုတာ သင်ပေးမယ်။ သေချာ သင်ယူပြီး ညတိုင်း လုပ်ပေးရမယ်။ ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးရင် ငါဆုချမယ်။ မကောင်းရင်တော့ ထပ်အရိုက်ခံဖို့သာပြင်ထားပေတော့” သူရှေ့နည်းနည်းတိုးထိုင်လိုက်ပြီး ညဝတ်စုံကို ဟလိုက်ကာ လီးကြီးကို ထုတ်လိုက်သည်။ ရုတ်တရက် မြင်လိုက်ရစဉ် ထွေး ထိတ်လန့်သွားသည်။
ထွေး သည် ၈ လက်မကျော်ရှည်သည့် လူကြီးလီးကြီးနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်နေပြီ။ သူသည် ယောက်ျားတန်ဆာများ အကြောင်း ကြားဘူးသော်လည်း ဤမျှကြီးမားမည်ဟု တစ်ခါမှ မထင်ဘူးခဲ့။ ထိပ်တွင် အဖူးကြီးပါသည်။ နီညိုရောင် ကြီးဖြစ်သည်။ ထိပ်ဖျားတွင် အပေါက်ငယ်လေးပါသည်။ အရည်လေး အနည်းငယ်ထွက်နေရာ အလင်းရောင်တွင် တောက်လျှက်ရှိသည်။
“လက်တွေ ပေးစမ်း ထွေး” သူမအားပြောနေသော်လည်း မကြားနိုင်။ မျက်လုံးထဲမှာ ရှေ့မှောက်ရှိ လီးကြီးကိုသာ အာရုံဝင်စားနေသည်။ သူ့လက်များက ထွေး မေးစေ့ကို မလိုက်ကာ “ငါ့ကို လက်တွေပေး ထွေး၊ မင်း ခု ကိုင်လို့ရ တော့မှာပေါ့” သူမ မျက်တောင်တစ်ချက်ခတ်လိုက်ပြီး လက်ကို လီးအနားတိုးလိုက်သည်။ “လက်တစ်ဖက် မြှောက်ပြီး တစ်ချောင်းလုံးကို အပေါ်အောက် ကိုင်လိုက်စမ်း။ ဖြည်းဖြည်း။ လက်ကို ဖွထား။ ဟုတ်ပြီ။ အင်း… ကောင်းတယ်။ ထွေး လက်တွေက နုသားပဲ။ ဟုတ်ပြီးဖြည်းဖြည်းဆင်း။ ကဲ ပြန်တက်၊ ပြန်ဆင်း အဲဒီနားမှာ ခဏနား။ အောက်ခြေကို ဆုတ်ထား ။ နောက် လက်ဝါးတစ်ဖက်နဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပွတ်တင်။ ဖြည်းဖြည်းလေးလုပ်။ ကောင်းတယ်။ လထစ်ကို လက်ချောင်းတွေနဲ့ ဆုတ်လိုက်။ နည်းနည်းကြပ်။ ကဲ တက်လိုက်ဆင်းလိုက် ပြန်လုပ်။ လထစ်ကိုပါ ပွတ်။ အပေါက်လေး ပေါ်ကို လက်ချောင်းနဲ့ အုပ်။ အသာလေး ပွတ်။ လရည်လေးတွေ ထွက်နေတာ တွေ့လား။ ဟုတ်ပြီ အဲဒါကို လထစ်ပေါ် ဖြန့်ပွတ်လိုက်။ နင်လည်း ရွှဲလာပြီ မဟုတ်လား။ နင့်နှုတ်ခမ်းလှလှလေးကို ဖွင့်ပြီး လထစ်ကို လေနဲ့ မှုတ်လိုက်။ အိုး။ ကောင်းတယ်။ လေနွေးလေးက အတော်ကောင်းတာပဲ ထွေး။ နင် ဂွင်းတိုက်ပေးဘူးလား။ မလုပ်ဘူးဘူးလား။ နင်မဆိုးဘူးပဲ။ သဘာဝအတိုင်း လုပ်တာ ဒါမျိုးလုပ်သက်ရင့်နေတဲ့အတိုင်းပဲ။
ထွေး လက်များက ပူနွေးသော အသားကို ဆုတ်ကိုင်လိုက်သည်။ သူမထင်သလောက် မာတောင့် မနေ။ နူးညံ့၍ နွေးနွေးကြီးဖြစ်သည်။ ညွှန်ကြားချက်များကို နားထောင်ရင်း လက်က လီးကြီးကို အစုန်အဆန် ပွတ်ပေးသည်။ လထစ်ကြီးကို ပွတ်သည်။ နွေးသော လရည်များကို စမ်းမိသည်။ လထစ်ပေါ်သို့ အရည်များကို ပွတ်ပေးသည်။ ခိုင်းသည့်အတိုင်း လေဖြင့် မှုတ်ပေးသည်။ မှုတ်လိုက်လျှင် တောင် တောင် တက်သွားသည်ကို ကြည့်နေသည်။ “ကျွန်မတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးပါဘူး သခင်ကြီး” “ကျွန်မလုပ်တာ မှန်ရဲ့လားရှင်” ဒေးဗစ် က သူမလက်တစ်ဖက်ကို ဆုတ်၍ ဂွေးဥများဆီသို့ ပို့ကာ ကိုင်ခိုင်းသည်။ ဒါက တစ်မျိုးဆန်းသည်။ ဥ နှစ်လုံးက ကပ္ပယ်အိတ်ထဲတွင် လှိမ့်၍နေသည်။ အနည်းငယ် ညှစ်လိုက်သောအခါ ဒေးဗစ်၏ ညည်းသံကိုကြားရသည်။
“ဖြည်းဖြည်း ထွေး၊ ဥတွေကို သိပ်မညှစ်နဲ့။ အဲဒီထဲမှာ နင် အရသာခံဖို့ လရည်တွေ တထောကြီးရှိတယ်။” သူခုံပေါ်တွင် သေချာပြန်ထိုင်ရင်း ထွေး ဂွင်းတိုက်ပေးနေသည်ကို ကြည့်နေသည်။ ခုမှစလုပ်ဘူးသော သူမသည် သင်ယူမှု အတော်လေးမြန်သည်ဟုဆိုရမည်။ အစုန်အဆန် ထုပေးနေရင်း လက်မဖြင့် လထစ်ကို ပွတ်ပေးသည်။ လက်သည်းများက လထစ် အရစ်ကို အသာချစ်သည်မှာ သူ့ကို စ နေသလိုဖြစ်သည်။ “မင်းလက်တွေက အတော် ကောင်းတာပဲ ထွေး။ လီးတစ်ချောင်းကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ရန်မှန်းသိနေပြီ”
ထွေး အဖုတ်ထဲတွင် ပြန်ရွှဲလာပြန်သည်။ သူ့ လီး ကြီးကို ထုပေးနေရသည့် အလုပ်အပေါ် ဖီလင်ရနေသည်။ ထုသည့် နှုန်းကို နှေးလိုက်သောအခါ ဒေးဗစ် ခါးက ကြွပြီးရှေ့တိုး လာသည်။ လဥမျာကို ညှစ်သောအခါ နည်းနည်းများသွား လျှင် ဖင်ကြွလာပြီး ညည်းသံထွက်လာသည်။ တစ်ခါမှ မလုပ်ဘူးသော်လည်း နားလည်လာကာ ဒေးဗစ်၏ ချီးမွန်း အားပေး သံတို့က ဆက်တိုက် ထွက်လျက်။
“အင်း။ အား လားလား။ အရမ်းကောင်းတယ် ထွေး။ မြန်မြန်လေး ထုစမ်း။ ငါ ထွက်တော့မယ်။ ထွက်တာနဲ့ ငါ နင့်ပေါ်ကို တည့်တည့်ထားလိုက်မယ်။ နင့်ကိုယ်ပေါ်ကို လရည်တွေ ပန်းပစ်လိုက်မယ်။ ဟုတ်ပြီ လား ထွေး”
ထွေး ကျောင်းနေစဉ် တချို့ မိန်းကလေးတွေက လီး က ပူနွေးသော လရည်တွေ ပန်းထွက်လာတတ်မှန်း ပြောတာ ကြားဘူးပါသည်။ သို့သော် ဘယ်လိုဖြစ်မည်ဆိုတာ သူမ မမှန်းနိုင်။ အရည်တွေ ခုနလည်းထွက်လာသားပဲ။ သို့သော် လထစ်ပေါ်က စိမ့်ရည်မျှသာ။ ဒါမျိုးပဲ ဆိုရင်တော့ သူမပေါ်ကို ပန်းနိုင်မည် မထင်။ “ဟုတ်ကဲ့ ရှင့်” သူ့လက်များက လီးကြီးကို သူမဖက်ချိန်ဖို့ ကြိုးစားသည်။ ခုံပေါ်တွင် ထိုင်နေရင်းမှ ဒေးဗစ် သူမနား ပိုတိုးကပ်လာသည်။ လီးကြီးက ပိုမာတောင့်လာည်။ လက်တစ်ဖက်က လထစ်ပေါ်တွင်လည်းကောင်း တစ်ဖက်က ဥများကို အသာညှစ်ရင်းဖြင့် လည်းကောင်း ထွက်လာအောင် လုပ်ပေးသည်။
“ကောင်းတယ် ကောင်းတယ်။ အား။ ခွေးမ။ ငါ့လရေတွေ ထွက်ကုန်ပြီ” သူ့ကိုယ် ရှေ့သို့ တိုးရင်း ပန်းသည်။ ဒေးဗစ် တစ်ယောက် ဥများအားညှစ်ကာ ရှေ့သို့ ထု ထုတ်ခြင်းကြောင့် အရည်များစွာ ဆွဲထုတ်ခံရသလို ခံစားရသည်။ “အား” ပထမအသုတ် လရည်များ ပန်းထွက်ကာ ထွေး၏ ဘော်လီပေါ်၊ မျက်နှာပေါ် ကျကုန်သည်။
ထွေး က ပထမသုတ် လရည်များပန်းသည်ကို တအံ့တသြ ကြည့်နေသည်။ သူထင်သည်ထက် ပို၍ အရှိန်ပြင်းသည်။ နွေးနွေးအရည်များ သူမကိုယ်ပေါ်ကျလာသည်။ လက်က ဆက်၍ ထုပေးနေသည်။ နောက်တစ်ဖက်က ဥကို ညှစ်ပေး နေသည်။ နောက် တသုတ် ထပ်ထွက်လာပြီ။ တချို့က သူမလက်ထဲကို ပန်းသည်။ လီးကြီးတလျှောက် လရည်များ ပေကုန် သောကြောင့် ပို ၍ မြန်မြန် ဆက်ထုပေးနေ ရသလိုဖြစ်သည်။ နောက် ထပ် တစ်သုတ်။ လက်ဝါးထဲသို့ကျ သည်။ အားက လျော့သွားသည်။ နောက်တစ်ကြိမ်လာအုံးမလားလို့ သူမ ပိုမြန်မြန် တိုက် ပေးနေသည်။ ထွက်တော့လာသည်။ လီးထိပ်မှ အရည်များ သာ စီးလာပြီး လီးကြီးတစ်ခုလုံး နှင့် ထုပေးနေသော လက်များကို စိုစေသည်။
“အား။.. သိပ်ကောင်းတယ်။ ပြီးအောင် ဘယ်လိုထုရမယ်ဆိုတာ နင်ကောင်းကောင်းသိသားပဲ” ပူနွေးသော လရည်များ သူမပေါ်တွင် ပေကုန်ပြီ။ “ငါလိုးမ။ အင်း.. ကောင်းတယ်” နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ် သူမလက်ထဲ ပန်းထုတ်လိုက်ပြီးတော့ ထိုင်ခုံပေါ်သို့ ပစ်ထိုင်ချလိုက်သည်။ လီးကြီးမှာလည်း ပျော့ကျသွားသည်။ “ကိုင်း သွားလို့ရပြီ ထွေး။ နင် ကောင်းကောင်း လုပ်တတ်တယ်။ သေချာ သင်ယူလိုက်သားပဲ”
ထွေး ထလိုက်ပြီး အဝတ်များကို ကောက်ယူကာ ပြန်မဝတ်တော့ပဲ ထွက်ခဲ့သည်။ သူမ အလွန်ရှက်နေသည်။ အခန်းထဲ ပြေးဝင်ပြီး တံခါးကို အမြန်ပိတ်သည်။ အိပ်ယာပေါ်လှဲချလိုက်ပြီး မျက်လုံးများကို မှိတ်ထားသည်။ မျက်လုံးထဲတွင် သူမ ဒေးဗစ်ရှေ့မှာ ဒူးထောက်လျက် လရည်များ ပန်းထွက်ကာ သူမကိုယ်ပေါ်ကျလာတာ မြင်နေသည်။ သူမလက်များက အဖုတ် ဆီရောက်သွားကာ အစေ့လေးကို ပွတ်သည်။ သူမ ဖင်က ကော့တက်လာသည်။ ပိုကြမ်းကြမ်းပွတ်သည်။ “အားလားလား” သူမညည်းသည်။ လက်ကို ပါးစပ်ထဲထည့်ပြီး ပြီးသွားမှုကို အသံမထွက်အောင် ကြိုးစားသည်။ လက်က စောက်ရည်များကို အရသာခံမိသည်။ လျှာဖြင့် လက်ချောင်းများကို လျက် ရင်း ထပ်ပြီးသွားပြန်သည်။ ပါးစပ်ထဲတွင် လက်မှာပေနေသော လရည်များပါ ဝင်သွားသည်။ သူ့ဘော်လီကလည်း လရည်တွေ စိုရွှဲနေဆဲ။
မနက်ကျတော့ ထွေး လန်းဆန်းစွာထလာသည်။ သူ ညက ပြီးသွားတိုင်း ဒီလိုထလာမြဲ။ မိဘမဲ့ကျောင်းက မိန်းကလေး များက သူမကို သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ယောက်ျားလေး မရှိသော်လည်း အပြန်အလှန် လုပ်ကြကာ ကြီးလာလေ ပိုလုပ်ဖြစ်လေဖြစ်သည်။ ညက သူမ အရှက်ရခဲ့သည် တစ်ကိုယ်လုံး လရည်များ အဖြန်းခံရသည်။ ဒီနေ့ တွေ့လျှင် ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမည်လဲ သူမသိ။ စိတ်လှုပ်ရှားစေသည်။ အဝတ်လဲပြီး မီးဖိုထဲသွားကာ မနက်စာ စားသည်။ ရာဂျူးက ရောက်နှင့်နေကာ ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို မော့နေပြီ။ သူမဝင်လာသည်ကို ကြည့်နေသည်။ “မင်္ဂလာပါ ရာဂျူး”
“ညက အဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လား ဟ” သူ့မျက်လုံးများက အနည်းငယ်အရောင်တောက်လျှက် မေးသည်။
“အင်း။ ပြေပါတယ်” သူမ ညက ဒဏ်ပေးခံရမည်ကို ရာဂျူးသိပြီးမှန်း မေ့နေသည်။ ခုတော့ သူ့မျက်လုံးထဲမှာ ပြီတီတီ အကြည့် တစ်ချို့မြင်ရသည်ဟုထင်သည်။ သူမ ဘယ်လိုလုပ်ခံရမယ် ဆိုတာ သူ သဘောပေါက်ပြီးသား ဖြစ်နေမလား။
“ကောင်းတာပေါ့ ထွေး၊ ဒါကြောင့် ငါ နင့်ကို သဘောကျတာ။ နင်က ဘယ်လို နေရမယ်။ ဒေးဗစ် ကျေနပ်အောင် ဘယ်လို ထိုင်ရမယ် သိသားပဲ။ ကဲ သွားတော့မယ်။ နင်လည်း လုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်မဟုတ်လား” စနေနေ့တွင် အပြီးပေးဖို့ ခုံ ကို အမြန်ဆက်လုပ်ရအုံးမည်။ သူ့ စိတ်ကူး စိတ်သန်းကြောင့် ဒေးဗစ် စိတ်လှုပ်ရှား နေသည်။ ထွေးကို ခုံပေါ်တွင် ကုန်းလျက်၊ ဖင် ဘူးတောင်း ထောင်လျက်၊ ပေါင်များကားလျက် မြင်နေသည်။ တစ်နေ့တော့ ဒေးဗစ်က သူမကို ပေးနိုင်သည်။ သူ လည်း အဲလို နောက်က ဆော်ရမည်ထင်သည်။ ဖင်ကိုပါ ချရလျင် ပိုကောင်းမည်။ စိတ်ကူးနှင့် လီးတောင်လျှက် သူ့ အလုပ်ရုံဆီသို့ သွားသည်။
ထွေး စားသောက်နေစဉ် ဒေးဗစ် မီးဖိုထဲဝင်လာသည်။ ခေါင်းညိတ်ပြပြီး ကော်ဖီတစ်ခွက်ယူကာ ပြန်ထွက်သွားသည်။ နေ့ခင်းကျမှ စာကြည့်ခန်းခေါ်ပြီး နည်းနည်း သွေးတိုးစမ်းကြည့်ဦးမည်။
ထွေး က ဒေးဗစ် ကို နှုတ်ဆက်လိုက်သော်လည်း စကားသံထွက်လာချိန်မှာ ဒေးဗစ်မရှိတော့ပြီ။ ညက ဖြစ်ခဲ့တာ တကယ်မှ ဟုတ်ရဲ့လား။ ဒေးဗစ်သည် သူမကို ရှိသည်တောင်မထင်။ ကဲ ထားပါတော့လေ။ သူမ ပုံမှန်အလုပ်များကို စသည်။ အခန်းများကို ရှင်းသည်။ ဒေးဗစ်၏ အိပ်ခန်း၊ နောက် စာကြည့်ခန်း။ ဆိုဖာခုံကို ကြာကြာကြည့်မိသည်။ သူဒူး ထောက်ခဲ့ခြင်း၊ ဖင်နှင့် ပေါင်ကြားများကို ရိုက်ခံခဲ့ရခြင်း။ ပြီးနောက် ဒေးဗစ်၏ ထိုင်ခုံ၊ သူမပေါ် လရည်များပန်းချသည် ထိ ထုပေးခဲ့ရသောနေရာ။ ခေါင်းထဲမှ မနည်းထုတ်ပစ်ရသည်။ ပြန်တွေးတိုင် အဖုတ်က စိုလာသည်။ မနက်ခင်းက လျှင်မြန်စွာ ကုန်သွားသည်။ နေ့လည်စာအကြာကြီးစားသည်။ ထို့နောက် အလုပ်ဆက်လုပ်သည်။ ရာဂျူးနှင့် ဆုံသော အခါ သူမ စာကြည့်တိုက်ထဲရောက်နေသည်။
“ဒေးဗစ် က သူ့စာကြည့်ခန်းထဲလာခဲ့ဖို့ခေါ်နေတယ် ထွေး” သူမ တုန့်ပြန်မှုကို စူးစမ်းရင်း လာပြောသည်။
ထွေး အနည်းငယ် အံ့သြသွားသည်။ “ကျေးဇူးပဲ ရာဂျူး” သူမ တစ်ခုခု များ မှားလုပ်ခဲ့မိသေးလား။
ထွေး အခန်းထဲ ရောက်သည်နှင့် နားလည်လိုက်သည်။ ဒေးဗစ် က ခုံမှာထိုင်နေသည်။ ဆိုဖာက သူ့ရှေ့ကြမ်းပြင်မှာ။ ညဝတ်စုံကို ဝတ်ထားသည်။ “ငါ ဒီည အပြင်သွားစရာရှိတယ်။ ဒီတော့ ဒီနေ့ အလုပ်ကို ခုပဲ လုပ်လိုက်ရအောင်။ ဒီကိုလာ ထွေး.” သူ့အသံက လောလော လောလော နှင့် တောင်းဆိုသည်။
ထွေး လက်နှစ်ဖက်ကို ဘေးချလျှက် သူ့ရှေ့ရောက်သွားသည်။ “ဟုတ်ကဲ့ ရှင့်.”
သူ့လက်များက သူမ ခါးကို ကိုင်ကာ ရှေ့ဆွဲလိုက်သည်။ ဝတ်စုံကို အသာဟထား၍ လီးကြီးကို တစ်စိတ်တပိုင်း မြင် နေရသည်။ “ဒီနေ့ နင့်ဖင်တွေနာနေလား ထွေး?” သူမကို လှည့်ပြီး ဖင်ကို ကြည့်သည်။ အသာပုတ်လိုက်သည်။ “ထပ် ချရအုံးမလား” နောက် တင်ပါးတစ်ဖက်ကို ထပ် ပုတ်သည်။
“သိပ်မနာတော့ဘူး သခင်ကြီးဒေးဗစ်။ မနက်ကတော့ အတော်နာတယ်။ နည်းနည်းတော့ နာသေးတယ်။ အခု။” သူ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလို တင်ပါးများကို ကိုင်ကြည့်နေတာ ခံရသည်။ ပွတ်သတ် ဆုတ်နယ် နေပြန်သည်။
“ငါ စကတ် ချွတ်ကြည့်မယ်” ကြယ်သီးများကို အမြန်ဖြုတ်ကာ စကတ်ကို ဆွဲလှန်လိုက်သည်။ “ချွတ်လိုက် ထွေး၊ ပြီးတော့ အင်္ကျီ၊ ချွတ်လိုက်စမ်း မြန်မြန်လေး။ ငါအချိန်မရဘူး။”
ထွေး အမြန်ချွတ်လိုက်ပြီး ဘော်လီ၊ အတွင်းခံဘောင်းဘီ၊ ခါးစည်း၊ ခြေအိတ် တို့သာ ကျန်တော့မှ ဒေးဗစ်ကို ကျော ပြန်ပေးလိုက်သည်။ ဒေးဗစ်လက်များက ပိုးသား ပင်တီ ပေါ်မှ ပွတ်နေသည်ကို ခံစားရသည်။
“ပေါင်ကားလိုက်အုံး။ ထပ် ကား။ ဟုတ်ပြီ” ခြေထောက်တွေက ခြဲထားတာ ၃ ပေလောက် ရှိပြီ။ “ခါးကိုင်းပြီး ဒူးတွေကို လက်နဲ့ကိုင်လိုက်စမ်း၊ ဟုတ်ပြီ။ ကုန်း၊” ခါးကို လက်ဖြင့် ဖိချပြီး ဖင်ကို မြောက်နေအောင်လုပ်သည်။ တင်ပါးများက သူ့မျက်နှာရှေ့မှာ ဖျားယောင်း နေသည်။ “ဟုတ်ပြီ ကောင်မလေး။ ပေါင်ကြားကနေ ငါ့မျက်နှာကို ကြည့်နေနော်။”
ထွေး စိတ်လှုပ်ရှားနေသည်။ သူမ တစ်ကိုယ်လုံး ဖွင့်ပေးထားသလိုဖြစ်နေသည်။ ဖင်များက သူ့မျက်နှာရှေ့မှာ။ ပေါင် ကြားမှ သူလှမ်းကြည့်တော့ အားလုံးက စောက်ထိုး။ သူက သူမ တင် များကို သေချာကြည့်နေသည်။ အသားများကို ပွတ်သတ်နေသည်။ ပေါင်ကြားကို ပွတ်သည်။ ဘောင်းဘီ စွန်းမှပြူနေသော စောက်မွှေးလေးကို အသာဆွဲ ထုတ်သည်။ နာသဖြင့် သူမညည်းသည်။
ဒေးဗစ်က သူမ၏ ဘောင်းဘီကို ဆွဲပြီး ဖင်လုံးများ ပေါ်လာအောင်လုပ်သည်။ ဘောင်းဘီစက အဖုတ်ထဲသို့ တိုးဝင်သွား ပြီး အဖုတ်နှုတ်ခမ်းများကို ခွဲလိုက်သည်။ လက်ချောင်းများက ဖင်ကြားထဲ ထိုးဝင်ပြီး ရွှေ့ကာ အဖုတ်အထိ ရောက်သွားသည်။ ဘောင်းဘီမှာ စိုလာမှန်းသူသိသွားသည်။ “ရွှဲလာပြန်ပြီလား ထွေး? ပေါင်ကြားမှ သူမမျက်နှာကို စိုက်ကြည့်ရင်း လက်ချောင်းများ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းပွတ်သည်။ ဖင်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းတစ်ချက်ပုတ်လိုက်ပြီး “ဒူးထောက်ပြီး ရှေ့မှာထိုင်စမ်း။ မြန်မြန်” အင်္ကျီထဲမှ လီးကြီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ “ငါ့ကို ထပ် ဂွင်းတိုက်ပေးစမ်း။ သင်ပေးစရာ မလိုတော့ဘူးမဟုတ်လား။ ဟေ”
ထွေး အဖုတ်ထဲမှာ ယားပြီး စိုနေပြီ။ သူမ ပြန်ရပ်လိုက်ပြီးမှ ရှေ့တွင် ဒူးထောက်ချလိုက်သည်။ “ရပါပြီ သခင်ကြီး။ ကျေနပ်အောင် သမီး လုပ်တတ်ပါပြီ” လက်တစ်ဖက်က လီးကြီးကိုကိုင်၊ နောက်တစ်ဖက်က ဥများကို အသာ ကိုင် သည်။ ဂွင်း စ ထုပေးပြီ။ လေနှင့်လည်း အသာမှုတ်ပေးသည်။ ဥကို အသာလေး ညှစ်ပေးသည်။ တစ်ဖက်က ဖွဖွလေး စုန်ချီဆန်ချီ တိုက်ပေးသည်။
“ဒီတစ်ခါ ငါ ပြီး ရင် နင့်မျက်နှာကို ပန်းမယ်။ အဝတ်တွေပေါ် မကျစေနဲ့။ မျက်စေ့ကို လည်း ပိတ်မထားမိစေနဲ့။ ငါ ပြီးရင် နင့်မျက်လုံးတွေကို မြင်ချင်တယ်” ခုံပေါ်တွင် မှီထိုင်ရင်း ချစ်စရာ မိန်းမပျိုလေးက ဂွင်းတိုက်ပေးနေသည်ကို ခံစားနေသည်။ လေနှင့် မှုတ်ပေးနေသဖြင့် သူ့ လီးကြီးမှ နှစ် လက်မ လောက်သာ ဝေးသော သူမ မျက်နှာကို သေချာ ကြည့်နေသည်။ အရသာ အလွန်ရှိသည်။ ကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးပဲ။ သို့သော် ဒီညသည် သူ့ကို ဂွင်းတိုက်ပေးရတာ နောက်ဆုံးညသာ ဖြစ်ပေမည်။ နက်ဖြန် ဆိုလျှင် စနေနေ့။ သူမ၏ ပါးစပ်ကို စသုံးရတော့မည်။ ပြီးရင် လုပ်ခိုင်းထား သော ခုံအသစ်ကို သုံးရမည်။ ကြည့်နေရင်း သူသည် ပြီးကာနီးလာပြီ။ သူမလက်များက လည်း ပိုမြန်လာသည်။ “ကပ်ထား။ နင့်မျက်နှာကို” ပထမဆုံး လရည် တစ်သုတ်က သူမ နှာခေါင်းကိုတည့်တည့်ပန်းသည်။ ရုတ်တရက် ထွက်လာသော လရည်များကြောင့် သူမ နောက်ကို တစ်ချက် တွန့်သွားသည်။ နောက်တစ်ချက်က ပါးပေါ်သို့ ကျသည်။ ပါးစပ်နားသို့ရောက်သည်။ “ငါ မပြောမချင်း သုတ်မပစ်နဲ့အုံး” သူမ ခေါင်းကို ဆွဲကပ်လိုက်ပြီး “ဆက်ထု။ နောက်တစ်ခေါက်ထွက်အောင် လုပ်စမ်း ထွေး ” သူမ ဆက်လုပ်နေသည်။ ဥလေး များကို ညှစ်သည်။ ဒီတစ်ကြိမ်တော့ သူမနှုတ်ခမ်းများကို ပန်းသည်။ သူက နှုတ်ခမ်းပေါ်က လရည်များကို ဆွဲ စု ကာပါးစပ် တစ်ဖက်မှ တစ်ဖက်စွန်းသို့ ဖြန့်သည်။ “ကဲ နှုတ်ခမ်းတွေပြောင်အောင် လျက်လိုက်စမ်း ထွေး။ ဘာမှ မကျန် စေနဲ့”
ထွေး မျက်နှာပေါ်သို့ လရည်များ ပန်းခံရပြီ။ ပူနွေးသော လရည်များက မျက်နှာပေါ်မှာ စီးနေစဉ် ပို၍ ပို၍ သိမ်ငယ် သွားသလို ခံစားရသည်။ သုတ်မပစ်ဖို့လည်း ပြောသည်။ မျက်နှာကို ဆွဲကပ်ပြီး နောက်ဆုံး တစ်သုတ်ထွက်အောင် လုပ်ခိုင်းသည်။ သူမနှုတ်ခမ်းကို ပန်းချင်မှန်း နားလည်သည်။ နှုတ်ခမ်းက်ိုလျက်ခိုင်းနေပြီ။ သူမ မလုပ်ချင်။ သို့သော် မငြင်းပယ်နိုင်။ ညက သူ့လရည်များကို ကိုယ့်လက်ကို စုတ်ရင်း အရသာခံဘူးပြီ။ လျှာကို အသာထုတ်ကာ နှုတ်ခမ်း များကို သတ်သည်။ ပါးစပ်ထဲ လျက်သွင်းသည်။ ချွဲချွဲ ငံကျိကျိ အရသာကို ခံစားရင်း လျှာဖြင့် နှုတ်ခမ်းကို ထပ်သတ် နေသည်။
“ငါ လရည်ထွက်လာတုန်း နင် နောက်ကို တွန့်သွားတယ်မဟုတ်လား။ နင် နက်ဖြန်ညကျ တစ်ခါ ဒဏ်ပေးခံရမယ်။ ကဲ သွားတော့။ ငါလည်း အပြင် သွားတော့မယ်”
ထွေး အဝတ်များကို ကိုင်ကာ အပြင်ပြေးထွက်ခဲ့သည်။ နှာခေါင်းနှင့် ပါးပေါ်မှာ လရည်တွေနှင့်။ နက်ဖြန်ည ဒဏ်ထပ် ပေးခံရမည် ဆိုသောကြောင့် မျက်ရည်တွေလည်း ကျဆင်းနေသည်။ ဒီတစ်ခါ ဆို အရင်တစ်ခါထက် ပိုဆိုးမည်မှန်း လည်း သိသည်။ အခန်းထဲပြန်ဝင်ကာ ငိုညည်းနေသည်။ လက်များက ရွှဲနေသော အဖုတ်ဆီရောက်သွားကာ အစေ့ ကို ရှာသည်။ မာတောင်နေသော အစေ့ကို ပွတ်သည်။ ခါးက ကုတင်ပေါ်မှာ တစ်လှုပ်လှုပ်နှင့် ပြီးသွားသည် အထိ ပွတ်နေသည်။ သူမလက်ချောင်း တချို့က မျက်နှာပေါ်က လရည်များကို သုတ်ကာ ပါးစပ်ထဲသို့ ထိုးထည့်သည်။ ကျန်လက်များကို ပေါင်ကြားထဲမှာ ညှပ်ထားသည်။
အပိုင်း (၄) ဇာတ်သိမ်း ဆက်ဖတ်ရန် >>